Chikumi 18, 2018 arun
Square anogamuchira New York BitLicense
Cryptocurrency makasimba Square akaita yakasimbiswa rakapotsa mari rezinesi kubva New York State Department of Financial Services.
Square zvakazara yakatanga kukwanisa kutenga uye kutengesa Bitcoin zvayo Cash App muna January asi saka kure vasingagoni kupa chikamu New York.
Zvino Kuchinja, sezvo yava rechipfumbamwe chakasimba kupiwa BitLicense.
“Tinofara kuti ikozvino kupa New Yorkers pamwe Cash App kuti nokukurumidza uye nyore nzira kutenga uye kutengesa Bitcoin "anodaro Square VP, Brian Grassadonia.
Emergency wakangwarira startup Chenjererai! anowana Bitcoin mubhadharo Anwendung BitWall
BitWall, ari FinTech yakasimba rinozivikanwa kudzidzisa pfungwa imwe Twitter-dzinofambiswa Bitcoin Paywall mabhuku paIndaneti, kwave akawana Watch Out! Inc.
Chenjerera! Inc. iri pari kuva kwayo flagship chigadzirwa, self vanoda App unoendesa nguva chaiyo, dzinonetsa mashoko vanoshandisa munguva ngozi.
Maererano Michael Lucas, mukuru mukuru pana Watch Out!, ichocho runoita Watch Out! kuti nokupinza yakagozha nomazviri crypto chakabatsira mubhadharo.
Benjamin Katz kupenda akatengesa kuburikidza paIndaneti maberere nokuda 150 BTC
Bitcoin ari kuita nzira kwayo kupinda unyanzvi nyika, mumwe Benjamin Katz kupenda chete kutengeswa 150 BitCoins ($1.25M.)
The kupenda akatengeswa na ato Gallery, paIndaneti Gallery, uye yose ngaakuitirei kwaiitwa nokupira mameseji Apps, akadai Instagram, chiratidzo, uye Postmates.
The mutengi ndasangana muridzi maberere, kubvunza mutengo kudzinganisana Mwoyo / Northern Lights kubudikidza Benjamin Katz. Waunotarisira mutengi akataura zvose Katz uye Eldridge nomukombiyuta munzanga vezvenhau Apps vasati kugadzira chipo 150 BitCoins, iyo chakagamuchirwa.
Zviremera Italian torera BitCoins kubva hacked BitGrail Exchange
BitGrail, rokuItari cryptocurrency Exchange, akazivisa nhasi kuti BitCoins mudura rakasimba kuti chikwama dzakatorwa nezviremera Italian.
The nepfari kunotevera chikumbiro chakanga kudare ne 3,000 vakaurayiwa BitGrail Hack.
The CEO pamusoro BitGrail, Francesco Firano akanga akataura kuti hazviiti kuti mudzorere chakabiwa mari.